Umdlali weBafana Soccer Player uLionel Messi
Ukuba ufuna umdlali webhola ekhatywayo kwihlabathi, kukho izinto ezimbalwa ezigqithiseleyo kunokuba uLionel Messi usebenzisa umxube wezantya kunye noqhinga lokubetha abakhuseli abaninzi ukusuka kwindawo yakhe kwindawo yokuhlaselwa kwe-Barcelona.
UPele noMaradona bathatyathwa ngabaninzi kubadlali abalungileyo abaye banqumla ibhola, kodwa akukho ukunyanisela ukuthetha ukuba uMesiya ngoku ufune isikhundla esithile kunye nalaba badlali kwibhola lebhola lebhola yama-greats.
I-Argentine yajoyina i- Barcelona eneminyaka eyi-13, kunye neklabhu ehlawula unyango kwi-hormone yokukhula engenakunzima eyayisongela ukuqhubela phambili inkqubela yakhe. Yiluphi utyalo-mali olubukhali olubukeka ngoku, kunye no-Messi sele sele sele igosa lenjongo yokurekhoda.
Igama: Lionel Andrés Messi
Umhla kunye nendawo yokuzalwa: ngoJuni 24, 1987 e-Rosario, eArgentina
Iqela langoku: i- Barcelona (La Liga)
Iqela elidlulileyo: uNewell's Old Boys (1995-2000)
Umsebenzi wamazwe ngamazwe: 2005 ukuza
Hambisa ukusuka kuNewell's:
UMesiya waqala ukudlala iklabhu yaseArgentine i-Newell's Old Boys eneminyaka eyisibhozo emva kokuphuma iminyaka embalwa kunye neqela lakhe lendawo. Uyise wayengumsebenzi wefektri kwaye unina uhlambulukile, kwaye abazange bakwazi ukuhlawula imali efunekayo ukulungisa ukulahleka kwakhe kwehommone yokukhula. Kwakhona kunjalo nangomlambo weMlambo ababanomdla wokusayina umdlali.
I-Barcelona, ​​ngoko ke phantsi kolawulo lwesikhonzi seqela lexesha elide uCarles Rexach, laxhamla ngesithembiso sokuhlawula i-$ 800 ngenyanga efunekayo ukuhlawula iibhili.
Akuyinto yokunyanisela ukuthetha ukuba i-destiny yomdlali kunye nekamva lekamva liphinde lihlaziywe.
UMesiya uza kuba ngcono kwiqela le-B ngaphambi kokuba enze iqela lakhe lokuqala kuqala ngokumelene ne-Barcano yesixeko sase-Espanyol. Injongo yakhe yokuqala yayiza kulandelana no-Albacete eneminyaka eyi-17, iinyanga ezili-10 kunye neentsuku ezisixhenxe, okwenza ibe ngumncinci weclub weLiga .
Ubukho bukaMesiya e-Barcelona bukhula, kangangokuba iqela lagqiba ukuba ayifuni ukugcina izinto ezifana noRonaldinho noDeco ngo-2008.
Injongo yeLa Pulga (i-Flea) neGetafe ngo-2007 iCopa del Rey kwafuneka ibonakale ikholelwa. Wagijima ukusuka kumgca webala, ebetha wonke umdlali oye wawela umendo wakhe ngaphambi kokuba ajikeleze umgcini. Iinjongo ezinjengeenkumbulo zomdlalo kaMaradona owawudume ngokumelene neNgilani kwiNdebe yeHlabathi ka-1986 kwaye yakhuthaza kuphela ukuthelekiswa phakathi kwababini.
U-Messi uzuze izihloko ezisixhenxe zeBafana, kwaye ngo-2008/09, emva kokufumana i-jersey, ku-Ronaldinho, wafumana amanqaku angama-38 kuwo wonke ukhuphiswano. UAndres Iniesta no-Xavi Hernandez baqonda ukuqonda nge-telepathic kunye no-Messi, uBarca wayinqoba uLiga, Champions League kunye noCopa del Rey.
UMesiya uza kuba ngcono ukuba i-goal goal ye-38 kule minyaka emibili elandelayo, ibhola i-45 kunye no-50 ngokulandelelana njengoko iBarca iphumelele ubungqina, ngelixa liphinde ligcine i- Champions League yesithathu ezintandathu. UMoses ulandele iinjongo zakhe ngokumelene neManchester United kwi-Final Champions League ka-2009 ngokutshutshiswa ngokukrakra ngokuchasene nabadlali abafanayo ngo-2011.
I-Argentine, eyalinqoba i-World Player yoMnyaka ibhaso kathathu, ingenalo ubuntu bukaMaradona, kodwa engenayo inkathazo yokuzibonakalisa entsimini, kunye nesigqibo sikaBarca sokuphucula umvuzo wakhe kunye nesigqibo sokuthenga ngaphandle kwexesha elinye bonisa le nto. Ungumgcini werekhodi yaseBrazil kwaye uvelise ukukhwaza okumangalisayo kweenjongo ezingu-73 kwixesha le-2011-12.
Ngo-2013, uMoses wafumana amanqaku angama-91 ukubeka irekhodi elitsha ngeenjongo ezifunyenwe kunyaka wekhalenda, eyadlula i-85 ka-1972 uGerd Muller.
UMoses wandinceda i-Barcelona ukuba ibe yintonga yesibini kwiminyaka eyisithandathu, njengoko uBarca waxosha bonke phambi kukaLuis Enrique ngo-2014-15.
Utyalo-mali olusisigxina eBrazil ku-Neymar noLuis Suarez luthintele 'uMespendpendencia' - inkolelo yokuba iBellona yayixhomeke kakhulu kwi-superstar yayo.
Ngoku uNeymar noSuarez balinganisa ngokuqhelekileyo kwaye i-trio ixhaswe ngaphandle kweenjongo ezingama-137 ngo-2015. Ukuba khona kweBrazil kunye ne-Uruguaya kunciphise inani leenjongo ezifunyenwe nguMesiya, kunye noSuarez bathatyathele kwiziko lokuhlaselwa . I-Messi ye-2011-12 yeenjongo ezingama-73 ngexesha elilodwa alikwazi ukuba liphindwe ngokukhawuleza nje ngokuba uNeymar noSuarez baqhuba ngokubambisana kunye neqela labo iqabane-iinjongo zibelwana ngoku.
Ukubonakala kokuqala kukaMesiya kwi- Albiceleste (i-White kunye ne-Sky blue) yeza kulwa noNxeba ngo-Agasti 17, 2005, kodwa wayethunyelwa ngaphandle kwemizuzu emibini ezayo ngokukhahlela umdlali.
Wabonakalisa kwiNdebe Yehlabathi ka-2006 eJamani kodwa umqeqeshi uJoseph Pekerman wayenqabile ukumnika umkhululo kwaye waqala umdlalo omnye.
I-Barcelona ayifuni ukuba uMesiya adlale kwiMidlalo yeOlimpiki ka-2008 e-Beijing kodwa kwafikelelwa isivumelwano kwaye wayenceda ngokuqinisekileyo ilizwe lakhe liwine indondo yegolide.
Kwakukho imbono phakathi kwabanye abagxekayo ukuba uMesiya uphantsi kweNdebe yeHlabathi ka-2010, njengeArgentina ifinyelele kwikota-final. Akazange abeke amanqaku (enze konke kodwa), kodwa wabonisa iitalente zakhe ezincinci ngokumelene neNigeria kunye neSouth Korea kwiinqanaba zeqela. Mhlawumbi akazange abe yinto engcono kakhulu, kodwa iNdebe Yehlabathi ka-2010 ayizange ibe yinto yokubhalwa nguMoses owayevame ukukhanya kwindawo yakhe emva kwabaphangi.
U-Messi wenza ngcono kwiNdebe yeHlabathi ka-2014, apho wayekhokela khona i-Argentina ukuya ekugqibeleni, ngaphambi kokulahlekelwa kakubi kwiJamani kwixesha elongezelelweyo.
Ukugqiba iqhosha lomdlali wesithathu kunye noNeymar kunye noRobin van Persie , uMoses unikezelwe iBhola leMidlalo kwiqela elibalaseleyo lomqhudelwano, okubangela ingxoxo enkulu eyenziwa nguJames Rodriguez, Arjen Robben kunye neqela elithile laseJamani. Kodwa uMesiya wadala amathuba amaninzi kunamnye umdlali, ngo-Andrea Pirlo kuphela ogqiba ezininzi ngebhola.
U-Messi uphononye kanye kuphela ngo-2015 eCopa America, kodwa wancedisa ecaleni lakhe ukuya ekugqibeleni kuphela ekuhluphekeni kwintliziyo ebunjengehlobo lokutshatyalaliswa kwehlwayo.
Ukuhlola izitayela kunye neZakhono zikaLionel Messi kunye noCristiano Ronaldo
Ixesha eli-10 elidlula i-Real Madrid Abadlali
Ilishumi kwiGosa eliLungileyo kwiGosa
Abalishumi abaPhezulu abasemagqabini abaLondayo kwiLizwe
Abadlali abaDlwengileyo be-10 abaPhambili bexesha lonke
Imithetho: Diego Maradona
Amagama angamaHebhere kumantombazana (GK)
I-FALSE: Ngaba i-Australia i-PM ixelela amaSulumane ukuba 'aguqule okanye ahambe'?
I-Architecture e-Ireland, Isikhokelo sohambo oluqhelekileyo
Kutheni i-Sharks ingafihliwe kwiSikali
Navaratri: I-9 Iimpawu Zesidima
Yintoni i-Teapot Yakho efanelekileyo?
Wow Abavakashi Ngezi Quotes zeMvumba
IsiXeko saseSin Hustler - Ngenxa yokuba ukusinda kwe-Apocalyptic kuthetha ukuhamba